Electric spray isibhamu - amandla, ukuvumela izinga ukupenda evele ezahlukene. Ukusebenza upende sprayer, kungashiwo ibhecwe opende, izixazululo kanye Izingxube yamanzi ezisekelwe izixazululo isinqandakuvunda ekwelapheni ukhuni, imithi yokubulala izinambuzane, impregnations ahlukahlukene, kwenziwa, upende wangaphakathi.
Guns zingahlukaniswa ngamaqembu 2:
- ukusetshenziswa ekhaya;
- nokuba angasetshenziswa ezimbonini, kuhlanganise semoto imidwebo.
Guns injongo yasendlini okudingeka bashintshashintshe ngayo ngokuya ukusetshenziswa upende. Esinokwethenjelwa ukusebenza. Isici esivelele sesimiso dispensers ezifana ukusetshenziswa kwezimali ezingelutho emoyeni onomfutho ngenxa yokudweba ezindaweni amancane ikhono sisebenze yimuphi compressor yasendlini. Kufanele kuqashelwe ukuthi compressor kumele kusetshenziswe gearbox futhi ube isihlungi-uya woma, lokhu kuzoncika izinga ukudaya. Kraskoraspylitel yasendlini kagesi kungenziwa akhiwe kokubili ethangini ephansi futhi elingenhla ithangi ilungiselelo.
Ukuze izicelo ezimbonini kuzuzisa ukusebenzisa umoya izibhamu, okuyizinto kangcono futhi ngokushesha kakhudlwana isetshenziswa ebusweni upende, lapho upende isetshenziswa kancane. izibhamu Professional oluqanjwe HVLP (okusezingeni eliphezulu komoya ngomfutho ongaphakeme) amasu. Kraskoraspylitel design zezimboni has a reducer nokucindezela gauge esisogwini isibambo futhi ikuvumela ukulungisa ingcindezi itheku.
Guns zingahlukaniswa, nezinye zindlela. On ukusetshenziswa kukagesi futhi ngaphandle kwalo. Ngaphandle ugesi usebenza imanuwali spray isibhamu. Isebenza idrayivu yomholi bese spray-non-viscous izingoma ezimibalabala. Manual spray isibhamu lingaphansi ngempumelelo uma ziqhathaniswa kagesi upende sprayer, kodwa ethengekayo.
Ukusebenzisa i kagesi upende sprayer, ukusebenza phezu ukupenda bachitha ngakho isikhathi esiningi nokuzikhandla kakhulu, njengoba roller ukusebenza noma shayela. Kulesi ephakanyiswe ebusweni ngaphezulu anemibala efanayo, kahle prokrashivaya ezindaweni ezingafinyeleleki futhi esingesihle.
Lapho usebenzisa esinye spray isibhamu ifenisha zasendlini kufanele embozwe ifilimu, ungenawo ngephutha ukupenda wakhe. Kodwa kukhona dispensers usebenzisa ukuthi lokhu akudingekile. Bona ukupenda sishaye kwenzeka kamnandi. Ngokwesibonelo, kagesi spray isibhamu Wagner Wall Perfect W665.
Electric spray isibhamu ukulungiselela umsebenzi, kubalulekile ukuba uthele ngopende ku ethangini, thatha ithuluzi esandleni, ukuwafaka yokuxhuma. Ungathola emsebenzini. Asikho esinye isenzo nemininingwane kuthiwa ayisadingeki. Njengomthetho, kukhona pass staining eyodwa kuphela.
Le ndawo we ebusweni zaveza kuzoncika ngevolumu isibhamu kwesigubhu spray, nesikhathi staining kuzoncika ithuluzi amandla. On ukudayiswa kukhona ongakhetha ahlukahlukene spray izibhamu. Umthengi idinga ukuchazelwa nalokho umthamo futhi kungakanani upende sprayer ithangi kuyinto eliphezulu kuye. Kuyadingeka ukuba banake khona noma ukungabi khona ukulungiswa likayinki ukuthengisela, kanye ubude hose kusukela ophephela isibhamu spray
Carpet tile: Ukukhetha futhi isitayela
Screed Electric: amathiphu wokukhetha kanye nokubuyekeza. Gasoline screed Electric
Hoe - a ... hoe, hoe (isithombe)
Umsiki Ibhukwana ngamapayipi ensimbi: izinhlobo, izici, isicelo
Ukufakwa ukwahlukanisa. Yesigcilikisha ngoba Styrofoam
Dream Ukuhunyushwa: dream okuyinto Roma
Multivarka Philips iyakwazi ukupheka, sikadali, ukubhaka!
Seal zilwane. Zingaki ngempela izinto eziphilayo ezimpawu khona
Zisengwa machines izinkomo: izinhlobo idivayisi izici
Acrylic nakubhavu: engcono umkhiqizi (isilinganiso). Isilinganiselwa abakhiqizi Russian
Thenga izinhlanzi: dream nencazelo, incazelo, emagama
Trampoline Inflatable. Izinzuzo kanye Izici
Kuyini overdraft. Sberbank futhi izinhlobo obolekisayo
Indlela yokudweba i-portrait emafutheni ngendwangu?